Myanmar Defence Weapons: တပ်မတော် (လေ)ရှိ တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ်များ
Posted by MM at 3:23 PM
ko phone January 3, 2013 at 3:56 PM
မန်မာ့တပ်မတော် (လေ)မှ ယခုမြင်တွေ့ရတဲ့ ရဟတ်ယာဉ်များကို အကန့်သတ်နှင့် (သို့) အသုံးပြုမှု ရပ်ဆိုင်းထားပြီးလို့ သိရပါတယ်....။
I heard Bell 205 Huey had many problems, another reason is they are old. It remind me about my classmate's father who lost his life when it crash on Irrawaddy River.
than win tun January 4, 2013 at 4:35 AM
တပ်မတော်ရဲ့လေကြောင်း ကာ ကွယ်ရေးစနစ်တွေအကြောင်းဆွေးနွေးကြပါအုံး
MM January 4, 2013 at 2:56 PM
W-3 Sokol ရဟတ်ယာဉ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖော်ပြထားတာပါ ကိုphone ရေ...။
RoyalBettle January 5, 2013 at 8:02 AM
ရန်ပုံခွင်း သွေးသောက် January 5, 2013 at 9:50 PM
လေတပ်ကော ... ရေတပ်ပါ အတူတူ တိုးချဲ့သင့်ပါတယ် ... ဖြစ်နိုင်ရင် တာလတ်ပစ်ဒုံးတွေပါ သေသေချာချာ ဖြန့်ကျက်ချထားနိုင်တဲ့ အဆင့်ထိ မျှော်မှန်းပါတယ် ... ... ...
nay aung January 27, 2013 at 12:19 AM
ပါအုံး။THANK YOU ALL VERY MUCH.အရာခမ်းသိမ်းအဆင်ပြေပါစေ။
ဗထူး January 29, 2013 at 2:44 AM
မြန်မာ လေတပ်က တိုက်လေရင်တွေ နံပါတ်လေးမျိူးဆက်တွေ လားဆိုတာပြောပြပေးပါလား လို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ် နောက်ထပ်အဆင့်မြင့်တဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေ ထပ်ပြီးအင်အားမဖြည့်တော့ဘူးလား ဆိုတာကော်ပြောပြပေးပါနော် ခုမြန်မာလေတပ်ကိုတော့အားရမီပါတယ် ဒါပေမယ့်ဒီထက်ပိုပြီးအဆင့်မြင့်စေချင်ပါတယ် ကျွန်တောသီချင်တာတွေ ကိုသိခွင့်ရတဲ့အတွက်လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကို MM
အိပ်နေတာပဲကောင်းတယ် February 21, 2013 at 5:03 AM
ကို MM ရေ
2022013 မနေ့ကပေါ့
နိုင်ယင်သိပ်ကောင်းမှာပဲဗျာ ပါ ဝင်နိုင်မယ်ဆိုယင်ရော နိုင်ငံတော်ကလိုအပ်တဲ့
ကိုMM ရော ရွှေမြွေဟောက်စစ်ဆင်ရေးမှာ
MM February 22, 2013 at 3:44 PM
မျှော်လင့်ချက် ကြီးကြီးမားမား မထားမိသေးဘူးဗျ အခုမှ လေ့လာသူအနေနှင့် ဆိုတော့လေ.. နောက်တော့ မသိဘူးပေါ့...။ ပါဝင်ဖြစ်ရင်တော့ နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံသစ်တွေ ရတာပေါ့ဗျာ...။